Zomi Congress for Democracy | My Diary
20 Awesome Examples Of Beauty And Splash Photography →
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (Zomi Congress For Democracy) ကို နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် မနေ့က ခွင့်ပြုလိုက်ပါ တယ်။ ဂျူလိုင်လ ၅ ရက် ကြာသပတေးနေ့၊ နေ့စွဲနဲ့ ဇိုမီး ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဂင့်ကမ်းလျန် ဆီ ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပါတီတည်ထောင်ဖို့ ခွင့်ပြု လိုက်ကြောင်းနဲ့ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့ကို အပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင် ဖို့ ပြောဆိုထားတာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီအကြောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ခဏရောက်ရှိနေတဲ့ ဇိုမီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ပူကျင်ရှင်းထန်က အခုလို ပြော ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒါတွေက အဆင်သင့်ပါပဲ။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း မှာ လုပ်နိုင်မှာပါ။ ပါတီက အတွင်းရေးမှူး ရှိတယ်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေ ရှိတယ်။ ပါတီအသစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ နည်းနည်းပါးပါး မိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးတော့ – ဒါမှမဟုတ်ရင် လျှောက်ထားတဲ့သူ ၁၇ ယောက် ခေါ်ပြီးတော့ ဒီဥစ္စာ ဘယ်သူတွေ လုပ်မလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်မယ်လေ။”
“ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်ကတော့ နဂိုရ်ကတည်းကလုပ်ထားတာတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှာပါ။ ကျနော်တို့ မူက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့၊ ဒါကတော့ ပထမ မူပါ။ ဒုတိယအနေနဲ့ ပင်လုံစာချုပ်မှာ ၁၉၄၈ ခုတုန်းက လုပ်ထားတဲ့ ပင်လုံ စာချုပ်၊ နောက်ပြီးတော့ — ဆိုတဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်တဲ့ အခါမှာ ဒီမိုကရေစီရေးထဲမှာလည်းပဲ — ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်တဲ့နေရာ – အဲဒါကို ပင်လုံစာချုပ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ဒီ ဖက်ဒရယ်ပုံစံနဲ့မှ ပြည်ထောင်စုခိုင်မြဲမယ်ဆိုတာ- ဖက်ဒရယ်ပုံစံနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာ ရေးသားနိုင်ဖို့ – အဲဒီဥစ္စာလည်း ဒုတိယ မူ အဖြစ် ဖြစ်မှာပါ။”
Posted on July 7, 2012, in Zomi/Zogam thu. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.